साइकल साथी र समृद्धि| Nepal Pati
नेपाल इतिहाँस रच्नबाट चुक्यो
मुलुकमा विधमान शिक्षा नीति प्रति प्रचण्डको चिन्ता
महाअभियोगबाट बच्न अख्तियारका आयूक्त पाठकले दिए राजीनामा
बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरी हवलदार विरुद्ध जाहेरी
उखुबारीमा नौ वर्षीया बालिकाको शव फेला
साइकल साथी र समृद्धि
- भगवान खड्का
धरानका कृष्ण केसी पर्यटकलाई धरानका बिभिन्न पर्यटकिय स्थल घुमाउन साईकलको प्रयोग गर्छन । उनी एक्लैले थालेको यो व्यवसायमा अहिले धरानका करिब १५ जना युवा संलग्न छन् । ३ बर्ष अघि सुरु भएको साईकलबाट पर्यटक घुमाउने ब्यवसाय अहिले आकर्षकको केन्द्र बनेको छ । व्यवसायमा लागेकाहरुले अहिलेसम्म आन्तरिक र बाह्यगरि करिब ३ हजार पर्यटक साईकलमा धरान घुमिसकेका छन् भने झण्डै २ लाख आम्दानी छ ।
बारा निजगढका डाक्टर समिर चौधरी केही सकय अगाडी साईकलमा मुगुको राराताल पुगेर आइपुगे । आफुसँग गाडी, मोटरसाईकल किन्ने हैसियत भएपनि स्वास्थ्यकालागि सधै साईकल प्रयोग गर्ने चौधरी बताउँछन् । ‘गाडि, मोटरसाईकलमा लाग्ने सबै खर्च पनि जोगिन्छ,’ चौधरी भन्छन्, अहिलेसम्म आफु पुर्ण रुपमा स्वस्थ्य रहेको छु त्यो पनि साइकलकै देन हो । ’
भारतको नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियमपदार्थको अभाब भएपछि मन्त्री र उच्चओहोदामा रहेका सरकारी कर्मचारीहरुले समेत साईकल चढेका थिए । बिज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयले किन्नपाउने एउटा गाडी र दुईटा मोटरसाईकल बापतको पैसाले ७९ ओटा साईकल नै किनेको थियो । तर ती साइकल कता गए ?अहिले कसैले चढेको भने देखिन्न ।
अहिले पनि तराई मधेसका लाखौँ नेपालीको दैनिकीसँग जोडिएको छ, साइकल । तराईमा कतिपय नागरिकको पहिलो सवारी साधन नै साइकल हो । साईकलमा सानो सानो ब्यवसायबाट मनग्यआम्दानी गर्नेहरुको पनि कमि छैन । धादिङ्का बासु खड्काले १५ बर्षअघि साईकलमा थालेको तरकारी बेच्ने ब्यवसायबाट अहिले दुईजना छोराछोरीलाई बिदेशमा पढाइरहेका छन् । काठमाण्डौमा तीनतले पक्की घर त्यही साइकलको साहारामा बनेको छ ।
साईकलमा तरकारी, फलफुल, पानी, पत्रिका, दुध, बदाम, चटपटे लगायतका सामाग्री किनबेच गर्नेहरु बाक्लै देखिन्छन । यस्तो ब्यवसायमा पछिल्लो समय महिलाहरुको संलग्नता पनि बढ्दो छ । श्रीमानले दोस्रो बिवाह गरेपछि साईकलमा तरकारी बेच्न थालेकी काभ्रेकी सुष्मा आचार्य व्यवसायी नै भइसकेकी छन् । १३ बर्षमा गरेको सानो लगानीको व्यवस्थाबाट १७ लाख जम्मानै भइसकेको छ । दुई सन्तानको पढाई, लेखाईकालागि कसैको साहारा चाहिँदैन ।
नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री दिनहुँ साईकलको प्रयोगबाट कार्यालय आवातजावत गर्छन । डेनमार्क, स्पेन, जर्मन, बेलायत स्विडेन जस्ता देश साईकलको प्रयोग बढाउन लागि परेकाछन् । नेपालले आफ्नो आयातको २० प्रतिशत अथवा सबैभन्दा बढी खर्च पेट्रोलियमपदार्थको आयातमा गर्छ ।
नेपालमा बषौं अघिदेखि साईकलमा ब्यापार ब्यवसाय गर्नेहरुको पनि कमि छैन । हेर्दा सानो जस्तो लाग्ने साईकल र यसबाट गरिने ब्यवसायका कारण पछिल्लो समय नागरीकको समृद्धितर्फको यात्रापनि बढ्दै गएको छ । नागरिकको साथी बनेको छ साइकल । त्यसकै साहारामा समृद्धि हाँसिलहुन थालेको छ ।
लेन छ थाहा छैन
काठमान्डूमा साइकल चढ्ने कुरा आउना साथ संगै जोडिएर साइकल लेन को कुरा आउने गर्छ । साइकल लेन भन्नाले साइकल कै लागि भनेर बनाइएको छुटै बाटो भन्ने बुझिन्छ । साइकल लेन र अरु बाटाहरुमा धेरै फरक हुन्छ । राजधानीमा साइकल लेन मात्रै होइन साइकल शहर बनाउने चर्चा पनि बेला बेला चलिनै रहन्छ ।
सुरुमा वाताबरण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा लालबाबु पण्डितले उपत्यकामा साइकल लेन बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, उनी अहिले अर्कै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । अहिले बनिरहेको चक्रपथमा ड्रेन, फुटपाट र साइकल लेनसहित गरी २.५ मिटर मात्र छ । साइकल लेन बिनाको सडकले दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । निर्माणाधीन सडकमा छुट्याइएको २.५ मिटर ड्ेरनका लागि कि फुटपाट या साइकल लेनका लागि हो भन्ने प्रष्ट छैन ।
आठ लेनको फराकिलो सडक । फराकिलो सडकका दुईतिर उस्तै फराकिला फुटपाथ । ब्लक राखिएको फुटपाथ पनि दुई रंगको । सडकपट्टि साइकलमा गुड्नेलाई । किनारतिर चाहिँ मान्छे हिंड्नलाई । तर सडकतिरको भाग साइकलको लागि हो भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । साइकल लेन भनेर छुट्याइएको ठाउँमा साइकलपनि गुड्दैन । काठमाडौंको तीनकुनेदेखि माइतीघरसम्मको विस्तारित सडकमा साइकल लेनको व्यवस्था गरिए पनि यो प्रयोगमा आउन सकेको छैन । एक अध्यनका अनुसार विश्वका ३५ प्रतिशत यात्रा ५ किमी भन्दा कम र ५० प्रतिशत यात्रा १० किमी भन्दा छोटा हुन्छन् । यति छोटो दूरीकालागि साइकल नै हुने पनि अध्यनमा दिइएको छ ।
सुनसरी । धार्मिक ग्रन्थ अनुसार मानिसले ८४ हजार जुन...
पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र मर्ज गर्दै जन्माइएको...
गत माघ २१ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस...
खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले मिडिया मार्फत जन...
अलमलमै वित्यो सरकारको वीस प्रतिशत समय
"हैन, के गर्ने हो यसरी ? यो त अति भयो ! यो कस्ले बनाउने ? म त सक्दिन...